MacOS Big Sur 7 beta 11.3 ho an'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
MacOS Big Sur 7 beta 11.3 ho an'ny mpamorona
Ny kinova beta an'ny Apple dia mitombo hatrany amin'ny isan'ny fitaovany. Vao omaly ny macOS 7 beta 11.3 ora maro aorian'ny fanaovana toy izany amin'ny iOS, iPadOS, watchOS ary tvOS ho an'ny mpamorona.
Ireo kinova beta rehetra ireo dia manampy fiovana amin'ny fitoniana sy ny filaminan'ny rafitra, fa koa ny fanatsarana hafa toy ny emoji vaovao, eny fa na ny fiovana manan-danja toy ny fanatsarana ny fanamafisana na ny iOS, izay manampy fiovana lehibe toy ny safidy hamaha iPhone amin'ny saron-tava amin'ny alàlan'ny Apple Watch.
Noho io antony rehetra io dia mino izahay fa ireo kinova beta ireo dia apetraka ary ambonin'izany rehetra andrasan'ny mpampiasa Apple. Na izany na tsy izany tonga ity kinova hamaha ny hadisoana sasany hita tamin'ny betas teo aloha ary ankehitriny ny tompon'andraikitra dia miandraikitra ny fahitana olana vaovao na fanatsarana napetraka.
Ny zavatra tsara momba ny macOS Big Sur dia ny fananana rafitra tena milamina sy azo antoka ary ampifanarahana amin'ny processeur M1 vaovao an'i Apple.. Tsy misy fitarainana amin'ity resaka ity ary tsara ny fanovana ka tokony hiarahaba antsika an'i Apple noho izany. Ireo kinova beta ireo dia tokony ho lasa kinova ofisialy alohan'ny Apple dia efa nanambara WWDC ho an'ity volana Jona ity, saingy amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika intsony izay ho eritreretina ary mety ho io kinova 11.3 io no penultimate alohan'ny hetsika ahafahantsika mitsambikina mankany macOS 12 na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » MacOS Big Sur 7 beta 11.3 ho an'ny mpamorona
Ofisialy io: misy fiantraikany amin'ny Apple ny tsy fisian'ny puce amin'ny famokarana MacBook sasany.
Ity ve horonan-tsary tena misy an'ny AirPods 3? Tsia, sandoka izy ireo